Dayz Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Nweta ohere ndị eduga DayZ hacks, naanị ebe a na Gamepron. Anyị na-enye DayZ Wallhack, Aimbot, ESP, Radar na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ iji mee ka ndị ọrụ anyị dị njikere ịlụ ọgụ megide onye ọ bụla.
Boughtzụtala DayZ mbanye anataghị ikike? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rụba ama: Tupu ị zụta anyị DayZ hacks, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi DayZ Hacks
DayZ Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & Ọzọ
Alfa mbanye anataghị ikike
Olima mbanye anataghị ikike
ịzụta DayZ Hacks na 4 nzọụkwụ
Họrọ DayZ site na ụdị egwuregwu dị iche iche dị na Gamepron
Buru nke anataghị ikike atụmatụ na dabara gị mkpa kasị mma, emegide na-anyị nwere ihe dị gị mkpa!
Keyzụta igodo ngwaahịa gị site na iji processor na - akwụ ụgwọ (ma nwee nchedo), achọtara naanị na Gamepron
Mgbe ịzụrụ ngwaahịa igodo ị nwere ike ịnweta ma budata ngwa DayZ gị!
Gịnị mere Gamepron DayZ hacks?
Site na Cooper Hollmaier - Emelitere Ọktoba 14, 2021
DayZ's devs ekpughereghị atụmatụ ha maka patch ọzọ ga -abịa, mana ndị egwuregwu nwere obi ụtọ ịhụ ụfọdụ njakịrị Bohemia na -ewepụta. Ozi redio zoro ezo rụtụrụ aka na ndị egwuregwu chọrọ ịgbanahụ nnukwu ihe iyi egwu, nke nwere ike na -atụ aka na onye iro ọhụrụ na -abịa…
Nwelite 1.13 maka DayZ gosipụtara ọtụtụ ngwa ọgụ ọhụrụ mana ọ nweghị ihe na-agbanwe egwuregwu ewezuga mwepụta nke ọkụ mgbawa n'akụkụ egbe M16. Egwuregwu ahụ hụkwara mmalite nke ụfọdụ akwụkwọ akụkọ agbatịkwuru yana ihe ọhụrụ dị ka tinctures.
DayZ ka emesịrị emelitere na 1.13, mmelite ahụ agbakwunyela ụfọdụ atụmatụ na ngwa ọhụụ na egwuregwu ahụ. Ikekwe mgbakwunye kachasị ama ama bụ nke M16A2 yana ọkụ ọkụ ya. Nwelite a agbakwunyela ụdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche ị nwere ike iji mee ka ọdịdị gị dịkwuo mma.
Site na ntọhapụ nke mmelite 1.12 maka DayZ, Bohemia Interactive agbakwunyela ọtụtụ ngwa agha ọhụụ, gụnyere mma owuwe ihe ubi, fange mma, kukri mma, na ndị ọzọ. Egwuregwu ahụ na-egosipụtakwa ikike ịtọpụ ala ala ma ị nwekwara ike ịmalite iji ahịhịa griinụ na-eto eto na akwụkwọ nri.
Gamepron na-agbanwe ụzọ ị si egwu DayZ, ebe ọ bụ na ngwa ndị na-eduga anyị n'ụlọ ọrụ bụ naanị ihe ịchọrọ iji merie egwuregwu ndị ọzọ. Inwe ihe ịga nke ọma na egwuregwu dị ka DayZ na-ewekarị oge, ebe ị ga-ewulite ngwa ọgụ gị na ebe ị ga-asọmpi na ndị ọzọ. Chịkọta ihe onwunwe na ihe nzuzu ndị ọzọ niile bụ akụkụ buru ibu nke egwuregwu ahụ, mana ọ bụ n'ezie ihe na-agwụ ike - ọ bụ ya mere ị ga - eji iji DayZ hacks, ebe ị nwere ike izere "ihe na - agwụ ike" nke metụtara na-egwu egwu. Akụkụ dị mma nke egwuregwu a bụ ebe ị na-alụ ọgụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ na zombies gbara gị gburugburu, na-enye ndị egwuregwu adrenaline rush na-eme egwuregwu vidio dị ụtọ! Ezie na dịruru ná njọ onwe ya na-ada ụda na-akpali akpali, ọ na-esiri ike ịnweta site na enweghị enyemaka site na nri DayZ Ndị aghụghọ.
Ma ị ghọgburu na DayZ tupu ma ọ bụ na ị na-achọ ime nke ahụ oge mbụ, Gamepron nwere ike inye gị aghụghọ niile achọrọ iji mee nke ọma. Ndị ọzọ na-egwu egwuregwu ga na-atụgharị uche etu ị siri merie otu ebe a na-anabata ndị ọbịa, ụfọdụ n'ime ha nwedịrị ike ịgbakwunye gị dị ka enyi! Site na iji atụmatụ dịka DayZ aimbot, wallhack, ESP na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ site na ya, ngwa anyị nwere DayZ bụ ihe ngwọta kachasị dị ike dị na webụ.
A na-ahapụkarị Hacks ndị a na-ewere dị ka "ndị kachasị elu", mana ole na ole n'ime ha ga-ebi ndụ n'ụzọ ahụ. Ngwá ọrụ ọ bụla a zụtara na Gamepron na-ekwe nkwa iji mezuo ụkpụrụ gị na mgbe ahụ ụfọdụ, ebe anyị na-arụ ọrụ na ndị mmepe kachasị mma gburugburu. Imefu ego na nri DayZ mbanye anataghị ikike ga-bụghị naanị ka ị na-enwe egwuregwu ọzọ, ma ọ ga-dị nnọọ aka egwuregwu merie ke ofụri ofụri.
Nchebe bụkwa ihe kachasị mkpa ebe a na WinThat War, ebe anyị agaghị achọ ka a machibido ndị ọrụ anyị iwu mgbe ha na ngwaọrụ Gamepron na-egwu egwu. Anyị DayZ mbanye anataghị ikike na-abịa na n'elu-larịị nche, ikwe Player mbanye anataghị ikike na-enweghị nchegbu - ọ dịghị onye ego n'anya machibidoro mgbe ha na-aghọ aghụghọ na iji Gamepron! Ọ bụrụ n’inwee akaụntụ ochie ma ọ bụ ike gwụrụ gị ịnagide bans, naanị mbanye anataghị ikike DayZ anyị ga-enwe nchekwa zuru oke iji nye gị udo nke uche. Ọ bụrụ na ihe a niile dị ka ihe ị ga-eji, nweta ohere taa! Keyzụta igodo ngwaahịa maka DayZ mbanye anataghị ikike ma nwee ọdịiche maka onwe gị.
DayZ Wall mbanye anataghị ikike (ESP)
Ozi DayZ Player ESP (Aha, Ogwe ahụike, ebe dị anya)
DayZ Ihe ESP na nzacha
DayZ ịdọ aka ná ntị ndị iro
DayZ super jump mode (ọ nweghị ọdịda mmebi mgbe arụ ọrụ).
DayZ ọkpụkpụ & nzube isi configurable.
DayZ na-akwụ ụgwọ
AnyịDayZ Hack atụmatụ
Egwuregwu DayZ ESP
Anyị DayZ Player ESP zuru oke maka ịdebe ndị na-emegide gị. Hụ ha site na ntọala siri ike na nke opaque site na iji ESP (Ngosipụta Mmetụta Mgbakwunye).
Player ọmụma bụ otu nhọrọ ga-ekwe ka ị na-amụta ihe banyere gị iche. Hụ ihe aha ha, ahụike ha, na ọbụnadị ụzọ ha na-eji mbanye anataghị ikike DayZ.
Item ESP zuru oke maka ndị na-anaghị achọ igbu oge, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ka ha lee ụlọ anya maka ịkwakọrọ ihe ọzọ.
DayZ Aimbot anyi bu nke a kwadebere site naani ihe kachasi ike n’ime ya. Mee ihe ọ bụla ịchọrọ na DayZ site na iji DayZ Ndị aghụghọ!
DayZ Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti etiti)
DayZ ọkpụkpụ & nzube isi configurable
Hazie DayZ Aimbot site na iji ọkpụkpụ anyị ma lekwasị anya na nhọrọ nwere ike ịhazi, na-enye ndị ọrụ anyị ohere ịhazi hacks ha.
DayZ aimbot anya ndenye ego
Enwere ike iji nlele anya iji manye DayZ aimbot ka ọ gbaa egbe nwere ike ịhụ, ma zere ịkpọchi ndị iro nọ na mpaghara enyo.
Recoil bụ nsogbu na DayZ, ebe ọ na-amanye ndị egwuregwu ka ha gbanwee mgbe ha na-agba egbe. Wepu ya kpam kpam site na iji Recoil Compensator anyị!
Ihe ịdọ aka na ntị ga - eme ka ndị ọrụ Gamepron mara mgbe onye iro dị nso, maọbụ ọbụlagodi na ebumnuche ha na avatar ndị ọrụ.
DayZ super jump mode (ọ nweghị ọdịda mmebi mgbe arụ ọrụ)
Mbibi Fall agakwaghị achịkwa nsonaazụ nke egwuregwu gị, ebe ị nwere ike ịme ọnọdụ Super Jump ma gbanyụọ mmebi ọdịda kpamkpam.
DayZ bụ egwuregwu ga-akwụghachi onye ọrụ kacha mma ụgwọ oge ọ bụla. Iji anyị DayZ mbanye anataghị ikike ga unlock kpọghee ekwt gị ezi nwere, dị ka ọbụna ọkachamara egwuregwu ga-eche otú ị na-enwe ike iti ha. Na DayZ Aimbot anyị, gbaa gị ga-abụ ihe na-egbu egbu oge niile, ebe ESP / Wallhack na-eme ka ị mara. Ime ihe ziri ezi na ịzụta ohere anyị DayZ mbanye anataghị ikike taa.
Ewu ewu na DayZ Hacks na Cheats
DayZ ESP na Wallhack
Ndị ọzọ DayZ Hacks na Cheats
Ndị kasị ewu ewu DayZ hacks na Ndị aghụghọ ga-enyere gị aka imeri ihe ọkụ, dị ka ịchọta ihe ịga nke ọma na egwuregwu a metụtara gị larịị nke nkà maka ọtụtụ akụkụ. DayZ bụ otu egwuregwu egwuregwu royale kachasị ewu ewu nke ewepụtarala, n'agbanyeghị na ewepụtara ya afọ ole na ole gara aga, ọ ka bụ otu n'ime nhọrọ ndị ama ama ebe ahụ. Mgbe ịchọrọ ịnụ ụtọ ahụmịhe royale gị, iji DayZ mbanye anataghị ikike bụ ụzọ kachasị mma - ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ịnakọta akụ na ịkwakọrọ ebe kwesịrị ekwesị, ebe ọ bụ na ngwa ọrụ ahụ ga-elekọta nke ahụ.
Nwere ike iji atụmatụ gụnyere n'ime ewu ewu DayZ mbanye anataghị ikike iji nweta ihe uru na ọnọdụ ọ bụla, ọ dịghị mkpa onye egwuregwu na-ewepụta gị megide. Ezie na ndị ọzọ Player ga na-ịdabere na oge, ị ga-aga n'ime gị DayZ egwuregwu maara na a mmeri dị n'ụzọ.
E wuru DayZ aimbot anyị site na ala iji tinye atụmatụ niile bara uru, dị ka Ọkpụkpụ Prioritization na nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịhazi. Don't adịghị mkpa ndị kasị mma na ngwá agha na egwuregwu mgbe ị na-enwe ike see lekwasịrị na-egbu egbu ebe ọ bụla ogbugba, na na ihe mere ọrụ agaghị anwa anwa tụlee iji ihe ọ bụla ọzọ DayZ mbanye anataghị ikike. Anyị agaghị anwa anwa hapụ ndị ọrụ anyị ka ha nwee ebumnuche enweghị ntụ, ebe ọ bụ na ọ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ngwa ọrụ a! Rite uru na ihe ịtụnanya niile anyị jisiri ike daba na DayZ aimbot nke anyị taa site na ịzụta igodo ngwaahịa!
Gbanwe ntọala gị dị mfe site na menu egwuregwu, emere iji nye ndị ọrụ sitere na Gamepron aka ịhazigharị ha ha na ofufe. Youkwaghị mkpa ịnweta ntọala kwesịrị ekwesị tupu ịmepe egwuregwu gị, ma ọ bụ ọbụlagodi imechi ngwa iji gbanwee ihe - ị nwere ike ịdabere na menu egwuregwu iji mee ihe niile ịchọrọ.
ESP na Wallhacks bụ ihe dị mkpa na egwuregwu royale agha, nke mere na iji DayZ mbanye anataghị ikike ga-enyere gị aka karịa ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ezie na ọ fọrọ nke nta ọ bụla DayZ eji Aghọ Aghụghọ Ule na-aga nwere ụdị ụfọdụ nke ESP na-arụ ọrụ na, anyị nwere ọtụtụ dị iche iche nhọrọ ga-eme ka mmeri-apụghị izere ezere. Ndị egwuregwu ndị ọzọ ga - emekọ ọtụtụ zombies, ngwa ọgụ ọjọọ, yana ndị otu egwuregwu amaghị ihe na - eme; ekele, iji Gamepron ga-enye gị ohere izere nke ahụ. Iji njirimara ESP ga-ekpughe ma egwuregwu na ihe ndị bara uru, yana ọtụtụ ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe iji mee ka ị nọrọ.
Wallhacks na-eme ka ị mara ebe ndị iro dị tupu ị banye mpaghara, nke pụtara na ị gaghị abanye na nzuzo. Chọpụta ngwa agha kachasị mma site na iji Nkebi ESP, ma ọ bụ naanị ịmụtakwu banyere ndị iro gị na njirimara Player Information ESP!
Enwere ike ịchọta njirimara akara ukwu na Gamepron, ọ ga - ekwe ka ndị ọrụ DayZ anyị nwee ọfụma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo (n'ihi etu ọ ga - esi dị mma na ọnọdụ ziri ezi). DayZ map di oke ma na achoputa ebe ndi iro na-agha nwere ike buru ugha, mana iji ubochi DayZ anyi (gunyere ihe omuma nke ukwu) aghaghi ikpughe onye obula. Ndị ọrụ nwere ike ime ka akara Mkpịsị Ugwu ahụ wee chọpụta ebe ndị iro na-aga site n'azụ ha n'azụ, n'ihi na a ga-enwe usoro nzọ ụkwụ na-eduga gị na ọnọdụ ha. Hchụ nta nke onye iro gị ghọrọ ihe niile dị mfe karị! Kwaghịzi eche ndị iro gị ihu na ihu, dị ka njirimara akara ukwu ga-eme ka ị zoo na ndò ruo mgbe ị dị njikere iku.
Mgbe oge ruru ịlụ ọgụ, ị nwekwara ike ime ka Mmebi Dị Elu gbuo ndị iro gị ngwa ngwa. A na-eji ebe dị anya hụ etu ị si abịaru ndị iro nso!
Ndị na-egwu egwu ga-eme ka akụkụ kachasị egbu egbu nke ebumnuche ha mgbe High Damage gbanyere, na-enye gị ohere iwepụ obere oge ịlụ ọgụ na ịnwekwu oge mmeri! Enwere ike iji ebe dị anya hụ etu ị si eru nso ebe ị na-eji akara ukwu, mana kedu maka atụmatụ ndị ọzọ etinye n'ime? Ihe ndị dị na njirimara Radar na Iwepụ dịkwa ugbu a n'ime aghụghọ a, nke na-enye ndị egwuregwu ohere iwepu ụfọdụ nuances na-ewe iwe nke DayZ. Anwụrụ ọkụ, na-agbagha, na-awagharị, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike wepụrụ mgbe ị na-ahọrọ mbanye anataghị ikike na anyị na Gamepron!
Nchebe nke ngwaọrụ anyị bụ nnukwu ihe ị ga-atụle, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ anaghị echebara mbọ ha na-agba mgbochi aghụghọ anya ka ha kwesiri. Gamepron raara onwe ya nye ka edobere onye ọrụ, n'agbanyeghị ụdị aghụghọ ha na-achọ iji! Nọrọ nchebe na-eji naanị ndị kasị pụrụ ịdabere na DayZ hacks gburugburu, hụrụ ebe a na Gamepron.
Ngwa DayZ ajụjụ
Gịnị mere anyị DayZ Hacks
Anyị DayZ hacks-apụghị iti, na nke ahụ bụ n'ihi na anyị na a na-emepe emepe na partnering na elu-edu mbanye anataghị ikike mmepe maka a mgbe. Mgbe ị chọrọ ịhụ nsonaazụ ka ị na-eji DayZ hacks ozugbo, ndị ọzọ free na ọnụ ala ọzọ hacks na-agaghị enweta ọrụ ahụ. Eji Aghọ Aghụghọ Ule ziri ezi na-arụ ọrụ na Gamepron, anyị agaghị ahapụ gị.
Gịnị kpatara anyị DayZ Aimbot
Jiri DayZ aimbot anyị ka ị nweta nnukwu uru karịa ndị iro gị, ebe ị na-agaghị echefu ọzọ. A ga-ahapụ ndị egwuregwu ndị ọzọ iji amamihe ha wee nwee ike ịga n'ihu, mana ị nwere ike ịme ka DayZ aimbot anyị wee wepụ ndị iro gị site na iji ịpị aka. Egbula gburugburu ohia ma jiri ngwa ngwa gbuo Gamepron.
Kedu ihe kpatara DayZ ESP anyị
ESP anyị (Ntinye uche nke ọma) na-enye ndị ọrụ ohere ị nweta nhọrọ karịa nhọrọ ndị ọzọ nke DayZ na weebụ ugbu a. Ọ bụ ezie na ebe ndị ọzọ ga - eme ka ị hụ ọkpụkpụ ọkpụkpọ na ihe ọ bụla ọzọ, Gamepron na - enye onye ọrụ ọtụtụ ihe karịa mgbe a na - enye nhọrọ ESP. Gini mere ị ga - eji dozie ụkọ DayZ ESP?
Gịnị kpatara anyị DayZ Wallhack
Nkụda mmụọ bụ mmetụta na-agbanwe agbanwe mgbe ị na-eji mgbidi mgbidi zụtara site na ebe ọ bụla ọzọ karịa Gamepron. Ọ bụghị naanị na DayZ wallhack ga-eme ka ị hụ ndị iro ka ị ghara ịga n'ihu (yana site na oke siri ike / na-enweghị ike), mana ị nwekwara ike ịhụ ihe na ihe ndị dị n'elu nke ahụ. Ọ bụrụ na ị na-agbasi mgba ike ibibi ngwá agha kachasị mma na egwuregwu ahụ oge niile, Nkebi ESP na DayZ wallhack ga-enyere gị aka.
Kedu ihe kpatara DayZ NoRecoil anyị
Iweghachite nwere ike ịbụ ihe dị iche n ’imeri n’ọgụ na ime ka ọsọ gị belata. Iweghachite ekwesighi ịkọwa otu ị si egwu egwuregwu ahụ, yabụ na ọ bụ ya mere anyị ji mejuputa atụmatụ mwepụ nke ọma nke na-eme ka ndị ọrụ tufuo ya kpamkpam. Nke ahụ dị mma, ịnwere ike wepu mgbagha site na DayZ mbanye anataghị ikike gị, na-enye ndị ọrụ ọtụtụ ihe ziri ezi. Nke ahụ bụ ihe anyị na-eme na Gamepron!
Etu ibudata ihe kacha mma DayZ hacks?
Nwere ike ibudata ihe niile kachasị mma DayZ hacks ebe a na Gamepron, ihe ị ga - eme bụ ịzụta igodo ngwaahịa maka onwe gị. Anyị emeela usoro nbudata na usoro nrụzigharị iji mee ka ndị ọrụ anyị nwee ọgụgụ isi, ọkachasị ndị na-enwetụbeghị usoro a. Nweta uzo taa ma budata ihe kacha mma DayZ Ndị aghụghọ hụrụ na ntanetị! Nọrọ nchebe na-aghọ aghụghọ ule na anyị ebe a na Gamepron.
Gịnị mere gị DayZ hacks dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ?
Ọnụahịa anyị bụ ngosipụta nke ọrụ anyị na-enye, ebe ọ bụ na nke a abụghị naanị onye na-eweta mbanye anataghị ikike dị ala! Gamepron raara onwe ya nye ndị aghụghọ dị elu nke nwere atụmatụ ị gaghị ahụ ebe ọ bụla ọzọ. Nchebe anyị enweghịkwa atụ, ebe anyị na-echekwa ndị ọrụ site na ịnye 100% ndị aghụghọ na aghụghọ ọ bụla - ntinye DayZ anyị agaghị adị iche! Enwekwara ohere ole na ole dị na oge ọ bụla.
Họrọ oke oge gị dị ka mkpa gị si dị! Anyị na-enye oke oge kwesịrị ka ọ dabara onye ọ bụla, na-enye ndị ọrụ Gamepron mgbanwe zuru oke na ahụmịhe ha. You nwere ike ịhọrọ ịzụta ụbọchị 1, izu 1, ma ọ bụ igodo ngwaahịa nke ọnwa anyị n'aka anyị na Gamepron. Ndị ọzọ mbanye anataghị ikike na-enye ga-amanye gị ime ka a ogologo oge etiti, ma anyị achọghị ịmanye ndị ọrụ ime ihe ọ bụla.
Awesome DayZ Hack atụmatụ